Wargayska Marca Ee Madrid Ka Soo Baxa Oo Jose Mourinho & Man United Si Wayn Ugu Digtay, Taariikhdii Ay Sevilla Abuurtay Iyo Lacagtii Ay Red Devils Suuqa La Gashay Oo Sal Looga Dhigay. – GOOL24.NET
Wargayska Marca Ee Madrid Ka Soo Baxa Oo Jose Mourinho & Man United Si Wayn Ugu Digtay, Taariikhdii Ay Sevilla Abuurtay Iyo Lacagtii Ay Red Devils Suuqa La Gashay Oo Sal Looga Dhigay.
Wargayska Marca ee caasimada dalka Spain ee Madrid ka soo baxa ee Marca ayaan waqti badan ku lumin uu soo bandhigo taariikhda ay kooxda Sevilla ku soo samaysay kulankii Old Trafford ee UEFA Champions League ee ay Manchester United guusha 2-1 ka ahayd ka soo gaadhay. Marca ayaa isku xidhay lacagtii badnayd ee uu Mourinho isticmaalay iyo fashilka ay Sevilla kala kulmeen.
Warbixinta uu Marca qoray ayaa lagu sheegay in labadii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay oo kaliya ay Manchester United suuqa la gashay 350 milyan euros inkasta oo taasi ayna lacag badan la ahayn Jose Mourinho oo isla kadib guuldaradii Sevilla dalbaday in lacag badan loo gacan galiyo.
Haddaba shabakada Gool24.net ayaa si toos ah idiinku soo turjuntay warbixinta Marca iyo qaabka ay uga hadleen guushii Sevilla ee Man United ay ka soo gaadhay iyada oo bahdilaad lagu tilmaamay wixii Jose Mourinho iyo Red Devils ku dhacay. Halkan si toos ah uga akhriso warbixinta Marca oo aanu luuqada Af-somaliga idiinku soo turjunay.
“Sevilla waxay Old Trafford ku soo raaxaysatay habeen taariikhi ah maadaama oo labadii gool ee Wissam Ben Yedder ay ku filnaadeen in ay Manchester United ka tuurto Champions League inkasta oo Romelu Lukaku uu goolka calanka dhaliyay.Kooxda ree Spain ayaa ciyaarta oo dhan maamulaysay waxayna Jose Mouriho ku bahdileen goobta tababaruhu joogsado ee United”.
“Red Devils ayaa tartanka ku soo laabtay kadib markii ay sanadkii hore ku soo guulaysteen Europa League isla markaana ay kharash gareeyeen 350 milayan euros labadii xili ciyaareed ee la soo dhaafay oo kaliya.Paul Pogba (105m euros), Henrikh Mkhitaryan (42m euros, laakiin hadda kooxda wuu ka baxay), Eric Bailly (38m euros), Romelu Lukaku (84.7m euros), Nemanja Matic (44.7m euros) iyo Victor Lindelof (35m euros) oo dhamaantood qayb ka ahaa mashruuca”.
” Hadda waxaa looga tagay rajo la’aanta ku guulaysiga koobka horyaalka isla markaana waxaa laga tuuray wareega 16ka kooxod ee Chapions League. Ben Yedder ayaa ahaa geesiga kooxda Vincenzo Montella isaga oo laba gool dhaliyay kadib markii uu badalay Luis Muriel halka Steven N’Zonzi uu bandhig xusuus leh soo saaray ku laabashadiisa England”.
” Waxay ahayd habeen taariikhi ah oo Manchester dhexdeeda ah laakiin waxay u ahayd nasiib daro kuwii 350 milyan euroska kharash gareeyay, waxay ahaayeen 2000 kun ee taageerayaasha Sevilla ee safray kuwa heesyay siidhi yeedhintii ugu danbaysay”.
Shantii Daqiiqo Ee Mucjiadii Ben Yedder: ” Gool dhaliyaal badani laba gool kuma dhaliyaan marka ay booqdaan Old Trafford gaar ahaan marka ay ka soo baxaan kaydka kulanka bug baxa Champions league ah, laakiin Wissam Ben Yedder waxa uu maamulay habeen taariikhi u ah Sevilla.
“Kadib markii uu soo galay daqiiqadii 73 aad, waxa uu daqiiqadii 74 aad ku furay gool dhalinta dhamaystir qurux badan kadib markii uu baas ka helay Pablo Sarabia, kadib wax yar waxa uu madaxa ku helay in uu xariiqda dhaafiyo daqiiqadii 78 aad. Dhamaystirkiisii xooganaa iyo nasiibka ayaa ku filnaaday in uu ku garaacay David De Gea wuxuuna arkay Sevilla oo u soo baxday Quarter-finalka Champions league markii ugu horaysay ugu dhawaan 60 sano. Waxa uu sido kale twitterka kula wadaagay farxadiisa kadib kulanka”.
Sevilla ayaa ka mid noqotay kooxaha u soo gudbay wareega 16ka kooxood waxayna liiskan kula jirtaa kooxaha Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Juventus iyo AS Roma iyada oo caawa ay soo dhamaystirmi doonaan siddeeda kooxood ee tartanka UCL sii wadan doonaa waxaana wada ciyaari doona Barcelona iyo Chelsea oo Camp Nou ku balansan halka Bayern Munich oo haddaba so baxsani ay booqan doonto Besiktas.